အချို့သောအီလီနွိုက်ပြည်နယ်ရှိနေထိုင်သူများအဖို့ဆေးဘက်ဆိုင်ရာဆေးခြောက်ကတ်ပြားဖြင့်အိမ်ပေါက်ရန်မှာ ၂၀၂၀၊ ဇန်နဝါရီလ ၁ ရက်နေ့တွင်စတင်သည်။
ဆေးခြောက်ဆေးခြောက်လူနာများကိုမူလနေထိုင်ရာဆေးဘက်ဆိုင်ရာဆေးခြောက်လူနာများရရှိနိုင်ပါသည်။(၅) လက်မ (၅) လက်မရှည်သောဆေးခြောက်ပင်များ - အိမ်ထောင်စုတစ်စုလျှင်လူတစ် ဦး စီအတွက်မဟုတ်ပါ။
အဘို့အပိုဒ် 10 ၏သုံးသပ်ချက်ကိုနားထောင်ပါသို့မဟုတ်ကြည့်ပါ ဆေးခြောက်ကိုကိုယ်ပိုင်အသုံးပြုခြင်း (အိမ်ကြီးထွားမှု) ။ Illinois ဥပဒေပြုရေးမှအတည်ပြုသောစာမျက်နှာ ၆၁၀ စာမျက်နှာအတွက် link ကိုနှိပ်ပါ
ကံမကောင်းစွာပဲ၊ အီလီနွိုက်စ်တွင်မည်သူမဆိုသူတို့၏ကိုယ်ပိုင်ဆေးခြောက်ကိုကြီးထွားနိုင်မည်မဟုတ်ပါ။ သင်သည်ဆေးခြောက်အသုံးပြုရန်ဆေးခြောက်သုံးစွဲရန်စီစဉ်ထားပြီးဆေးခြောက်လိုင်စင်သို့မဟုတ်ကဒ်လျှောက်ထားရန်လိုအပ်သည်။ လိုင်စင်ရရန်သင်လျှောက်ထားရန်လိုသည် - ၂၀၁၅ တွင်လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ရန် ၁၀ လမှတစ်နှစ်အထိကြာတတ်သည်။ သို့သော် ၂၀၂၀ တွင်အီလီနွိုက်ပြည်နယ်ရှိသင်၏ဆေးဘက်ဆိုင်ရာဆေးခြောက်ကဒ်ပြားကိုတစ်ရက်သို့မဟုတ်ထိုထက်နည်းသောအချိန်တွင်သာရနိုင်သည်။
အလားအလာရှိသောစိုက်ပျိုးသူများအားလုံးကသူတို့၏လိုင်စင်ကိုရရှိမည်မဟုတ်ပါ။ သို့သော်၎င်းသည်သင်ပထမဆုံးပြုလုပ်ရမည့် (နှင့်လိုအပ်သော) အဆင့်ဖြစ်သည်။
အီလီနွိုက်ပြည်နယ်၏ရာသီဥတုမှာဤသို့သောကြောင့်ဆေးခြောက်ကိုအပြင်၌စိုက်ပျိုးရန်ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်အကြံမပြုထားပါ။ ထို့ကြောင့်၊ သင်အအောင်မြင်ဆုံးဖြစ်လိမ့်မည် အိမ်တွင်း၌ဆေးခြောက်ကြီးထွားလာသည်။
အဲဒီလိုလုပ်ခြင်းအားဖြင့်အကျိုးကျေးဇူးတွေအများကြီးရှိပါတယ်။ သင်သည်သင်၏အပူချိန်၊ လေ၊ အလင်းနှင့်စိုထိုင်းဆကိုထိန်းချုပ်နိုင်ရုံသာမကသင်၏အပင်များကိုပိုမိုတည်ငြိမ်သောကြီးထွားလာသည့်ပတ်ဝန်းကျင်ကိုထောက်ပံ့ပေးလိမ့်မည်။ ဤသည်ရေရှည်တွင်သင်၏ကုန်ထုတ်စွမ်းအားကိုမြှင့်တင်နိုင်သည်။
သင်၏ပတ် ၀ န်းကျင်ဆိုင်ရာလိုအပ်ချက်များကိုဂရုပြုပါ
မင်းအရင်ကဥယျာဉ်လုပ်ခဲ့ဖူးတယ်ဆိုရင်၊ အချို့သောအပင်များဘယ်လောက် fin ည့်သည်များဖြစ်မှန်းသင်သိလိမ့်မည်။ ဆေးခြောက်နှင့်ခြားနားသည်။ ကြီးထွားမှုအဆင့်တိုင်းအတွက်အလင်းကိုချိန်ညှိပြီးအနည်းဆုံး ၄၀ မှ ၆၀% စိုထိုင်းဆကိုလိုအပ်သည်။ အပူချိန် ၇၀ မှ ၈၅ ဒီဂရီ (အလင်းများမီးဖွင့်နေသည့်အချိန်) နှင့် ၅၈ မှ ၇၀ ဒီဂရီ (အလင်းများပိတ်ချိန်တွင်) လိုအပ်လိမ့်မည်။
လေဝင်လေထွက်ကောင်းခြင်း၊ လေဆိပ်နှင့်စစ်ထုတ်ခြင်းတို့နှင့်အတူအကောင်းဆုံးလေထုအရည်အသွေးကိုထိန်းသိမ်းရန်သင်လိုအပ်လိမ့်မည်။ ထို့အပြင်ရေအလွန်အကျွံသောက်ခြင်းကိုလည်းရှောင်ရမည်။
သင်မစတင်မီသင့်တွင်သင့်တော်သောကိရိယာများနှင့်ကျွမ်းကျင်မှုများသေချာထားပါ။ သင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံရန်လိုအပ်သည့်ပစ္စည်းများအမျိုးမျိုးရှိသည်၊ သင်တတ်နိုင်သည်ထက်အရည်အသွေးမြင့်မားလေ၊ နောက်ပိုင်းတွင်သင်ပိုမိုကောင်းမွန်လာလေလေဖြစ်သည်။
တစ် ဦး ကကြီးထွားလာအခန်းသို့မဟုတ် box ကိုကြီးထွားလာသည်
အထက်တွင်ဖော်ပြခဲ့သည့်ကိရိယာများအပြင်သင်သည်မှန်ကန်သောမျိုးစေ့များကိုလည်းထည့်သွင်းရန်လိုအပ်သည်။ သငျသညျဆေးဘက်ဆိုင်ရာရည်ရွယ်ချက်များအတွက်ဆေးခြောက်ကိုကြီးထွားနေလျှင်, သင်သည်အများဆုံး cannabinoids နှင့်အတူမျိုးတစ်မျိုးကိုရွေးချယ်ချင်ပါလိမ့်မယ်။ မဟုတ်ရင်အကောင်းဆုံးဆေးခြောက်အမျိုးအစားကွဲပြားလိမ့်မည်, သို့သော်ရွေးချယ်စရာများတွင် sativa, indica နှင့် hybrids များပါဝင်သည်။
သင်၏ပစ္စည်းကိရိယာများအားလုံးပြီးသည်နှင့်ဆေးခြောက်ကြီးထွားခြင်းတွင်ပါ ၀ င်သည့်အဆင့်အားလုံးနှင့်သင်ကိုယ်တိုင်သိဖို့လိုသည်။ ဟုတ်ပါတယ်၊ သင်သည်သင်၏အစေ့များကိုစိုက်ပျိုးပြီး၎င်းတို့အားအပင်ပေါက်ရန်စောင့်ဆိုင်းခြင်းဖြင့်စတင်ပါလိမ့်မည်။ သို့သော်သင်တို့၏အပင်များပျိုးပင်များ၊ ဟင်းသီးဟင်းရွက်များ၊ ပန်းများနှင့်နောက်ဆုံးတွင်ရိတ်သိမ်းခြင်းနှင့်ပျောက်ကင်းအောင်ကုသခြင်းအဆင့်ဆင့်ကိုဖြတ်သန်းစဉ်သင်သည်းခံမှုအနည်းငယ်လိုအပ်သည်။
သို့သော်စိတ်ရှည်ပါ၊ ပြီးတော့သင်၏ကြိုးစားအားထုတ်မှုသည်အကျိုးဖြစ်ထွန်းလိမ့်မည်။ အီလီနွိုက်ပြည်နယ်တွင်ဆေးခြောက်ကြီးထွားပုံကိုလေ့လာခြင်းသည်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအရအကျိုးဖြစ်ထွန်းစေရုံသာမကသင်အတွက်လည်းများစွာအကျိုးရှိသည်။
Illinois ၏အိမ်ကြီးထွားမှုဆိုင်ရာရုပ်ထုသည်ကိုယ်ပိုင်အသုံးပြုရန်အတွက် CRTA ၏ပုဒ်မ ၁၀ ဖြစ်သည်
အောက်ပါ IL ဥပဒေကိုဖတ်ပါ။ CRTA အပိုဒ် ၁၀
(ဤသည်အထက်ပါဗီဒီယိုနှင့် Podcast တခုကိုမှတ်တမ်းဖြစ်သည်။ )
အိုးမင်္ဂလာပါလူတိုင်း။ မိုက်ကရိုဖုန်းနဲ့ပိုနီးတာကောင်းတယ်ထင်တယ် ဒါပေမယ့်ဒီနေရာကိုလာပြီး Illinois, Springfield မှာဖြစ်ပျက်ခဲ့တာတွေကိုကျော်ဖြတ်ကြည့်ပါ။ ခင်ဗျားမြင်တာပေါ့၊ အီလီနွိုက်ပြည်နယ်ကဆေးခြောက်ကိုတရားဝင်လုပ်ခဲ့တယ်။ အီလီနွိုက်ပြည်နယ်ကိုဆေးခြောက်တရားဝင်တယ်လို့ပြောတဲ့အခါငါအရည်အချင်းပြည့်မီသင့်တယ်ထင်တယ်။ အီလီနွိုက်ပြည်နယ်အထက်လွှတ်တော်သည်ဆေးခြောက်ကိုတရားဝင်အတည်ပြုပေးခဲ့သည်။ နှင့်အီလီနွိုက်ပြည်နယ် '' ဆေးခြောက်တရားဝင် HB1438 ဖြစ်ခဲ့သည်။ အချို့လူများက၊
"ဘာကြောင့် HB1438 နဲ့ SB007 မဟုတ်တာလဲ?"
ဒါကြောင့်ငါကယ့်ကိုမြန်ဆန်စွာ, ငါ၏မျက်နှာပြင်မျှဝေသွားပါလိမ့်မယ်။ ပြီးတော့ခင်ဗျားတို့ဒီငွေတောင်းခံလွှာကိုမြင်နိုင်ပါလိမ့်မယ်။
သငျသညျ google ဆေးခြောက်ရှေ့နေ go လျှင်, သင်ငါ့ကိုရှာတွေ့နိုင်ပုံကိုပါပဲ။ ကျွန်တော့်နာမည် Tom Howard ငါက ... ဒါကငါ့ website ပါ ဆေးခြောက်စက်မှုလုပ်ငန်းရှေ့နေ။ လက်ရှိတွင်သာချီကာဂိုလိပ်စာတက်ရှိပါတယ်။ ဂူးဂဲလ်ဟာကျွန်တော့်စီးပွားရေးအတွက်ပြbusinessနာရှိနေတယ်။ ဒါပေမယ့်မင်းဘယ်လိုသိလဲ
ဒီတော့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါကငွေတောင်းခံလွှာပါ။ ငါထိန်းချုပ်မှုကိုထပ်မံနှိပ်လျှင်၊ ငါသည်ငါနေထိုင်သူကိုရှာဖွေနေသည်ကိုသင်တွေ့လိမ့်မည်။ ကျွန်ုပ်အနေဖြင့်နေထိုင်သူကိုရှာဖွေရတဲ့အကြောင်းရင်း…ပြီးတော့သင်ဒီမှာဒီဒိုမိန်းမှာ F ကိုထိန်းချုပ်မယ်ဆိုရင်ယုံကြည်တယ်။ ပြီးတော့ဒီဒိုမိန်း, စိတ်မပူပါနဲ့၊ ငါဒီဗီဒီယိုရဲ့ဖော်ပြချက်ထဲမှာငါပြီးသွားပြီ။ မနေ့ကအီလီနွိုက်ပြည်နယ်အထက်လွှတ်တော်ကဘာတွေအောင်မြင်ခဲ့တယ်ဆိုတာကိုသင်တွေ့နိုင်လိမ့်မယ်။ ပြီးတော့လူတချို့က“ အိမ်မကြီးဘူးလား” လို့ပြောနေတယ်။ တကယ်တော့ဒါကမင်းကိုပဲပြတာပါ။
အကယ်၍ သင်သွားပြီး SB ကိုရှာမယ်ဆိုရင်အဲဒါ SB ကမဟုတ်ဘူး။ ဤသည်ကို HB1438 မနေ့ကအီလီနွိုက်ပြည်နယ်အထက်လွှတ်တော်ကအတည်ပြုပေးခဲ့သည်။ နေထိုင်သူ ၃၈ ယောက်အနက် ၉ ခုသည်သင့်အားအီလီနွိုက်ပြည်နယ်၏အရွယ်ရောက်သူအိမ်သို့ကြီးထွားလာစေလိမ့်မည်။ ပြီးတော့အိမ်မှာကြီးထွားနေတုန်းပဲ။ သို့သော်သူတို့သည်သတ်သတ်မှတ်မှတ်ကန့်သတ်ချက်များကိုစတင်မိတ်ဆက်ပြီးပါပြီ။ တီသူပထမ ဦး ဆုံးနံနက်ကော်ဖီတစ်ငုံသောက်နေသည်။ ဘုရားရေ။ အီလီနွိုက်ပြည်နယ်နှင့်အထူးသဖြင့် Peoria၊ အီလီနွိုက်ပြည်နယ်သည်လတ်ဆတ်သောကော်ဖီအတွက်ကောင်းမွန်သည်။ ငါဘယ်နေရာမှာမဆိုသွားနိုင်မယ်မသေချာဘူး.
ဒါကြောင့်အိမ်မှာကြီးထွားနေ ဦး မှာပဲ။ သို့သော်၎င်းတို့သည်တစ်စုံတစ်ယောက်ဖြစ်ရန်သေချာအောင်လုပ်ထားပြီးပါပြီ၊ အီလီနွိုက်ပြည်နယ်တွင်နေထိုင်သူအသက် (၂၁) နှစ်နှင့်အထက်ရှိသူများသည်ဆေးခြောက်ဆေးဘက်ဆိုင်ရာဆေးခြောက်သုံးစွဲမှုရှေ့ပြေးအစီအစဉ်တွင်အရည်အချင်းပြည့်မီသောလူနာတစ် ဦး ဖြစ်သည်။ ၎င်းတို့သည်တစ်အိမ်လျှင်ငါးလက်မထက်ပိုသောအပင်ငါးပင်ကိုအကန့်အသတ်မရှိစိုက်ပျိုးနိုင်သည်။ စိုက်ပျိုးရေးစင်တာသို့မဟုတ်ယာဉ်ထုတ်လုပ်သူလိုင်စင်မရှိဘဲ။ ပြီးတော့ဒီပုဒ်မမှာနေထိုင်သူဆိုတာအီလီနွိုက်ပြည်နယ်မှာမွေးမြူရေးမတိုင်မီရက် ၃၀ အတွင်းမှာနေထိုင်ခဲ့သူဖြစ်တယ်။
လူတွေကမင်းကိုပြောနေတာကအီလီနွိုက်ပြည်နယ်မှာအရွယ်ရောက်ပြီးသူအသုံးပြုမှုကိုတရားဝင်လုပ်တဲ့နေရာမှာအိမ်မရှိဘူးလို့ပြောတယ်။ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းချေးငွေ, ဆေးဘက်ဆိုင်ရာဆေးခြောက်လူနာမဟုတ်သောလူတို့အဘို့အိမ်မှာကြီးထွားမဟုတ်ပါဘူး။ သင်အီလီနွိုက်စ်တွင်ဆေးဘက်ဆိုင်ရာဆေးခြောက်လူနာဖြစ်လျှင်အိမ်တွင်ကြီးထွားမှုရှိသေးသည်။ ငါပြောတဲ့အခါဘာကိုဆိုလိုတာလဲ။ ငါအီလီနွိုက်ပြည်နယ်နည်းပညာပိုင်းမှန်သည်ဆေးခြောက်တရားဝင်ကဆိုသည်။ ဤသည်အီလီနွိုက်ပြည်နယ်ပြည်နယ်အဆင့်မှာဆေးခြောက်တရားဝင်ရန်မဲပေးခဲ့သည့်ပထမ ဦး ဆုံးအကြိမ်ဖြစ်ပါတယ်။ Nebraska မှအပပြည်နယ်များသည်နှစ်နိုင်ငံစစ်ဖြစ်သောကြောင့်ဖြစ်သည်။ ဒါကြောင့်အထက်လွှတ်တော်လွန်ပြီ။ အထက်လွှတ်တော်ဥပဒေကြမ်းသည် SB007 ဖြစ်သောကြောင့်သို့သော်၎င်းသည်ထူးဆန်းသည်။ ဒါပေမဲ့ဒါကသူတို့ပေးလိုက်တဲ့ဥပဒေမဟုတ်ဘူး။ အဲဒီအစားသူတို့ HB1438 ဖြတ်သန်းရတယ်။ HB1438 ဆိုတာအိမ်ဥပဒေကြမ်းပါ။ ဒါကြောင့်အိမ်ဥပဒေကြမ်းကငါတို့ကိုမိတ်ဆက်ပေးခဲ့တာပါ။ ပြီးတော့အိမ်ထဲမှာအရည်အချင်းပြည့်မှီဖို့အိမ်မှာ Cassidy ကဒီဆေးဘက်ဆိုင်ရာဆေးခြောက်လူနာတွေပဲကြီးထွားလာတယ်။ ငါသွားတော့နောက်တစ်ခုကဒီမှာအစုလိုက်အပြုံလိုက်ဝေမျှလိုက်တာပါ။ ငါမင်းကိုမျှဝေရုံတင်မကဘူး၊ ဒီတော့အီလီနွိုက်စ် Med ရဲ့စာမျက်နှာ ၄၀ ကိုသွားပါမယ်။
Term 2020 သည်အီလီနွိုက်ပြည်နယ်လူကြီးများအသုံးပြုသောဆေးခြောက်ဥပဒေတွင် ၃၂ ကြိမ်တွေ့ရသည်
ကောင်းပြီ၊ ဒါကဆေးဘက်ဆိုင်ရာဆေးခြောက်မဟုတ်ပါဘူး၊ အရွယ်ရောက်ပြီးသူအခုဆေးခြောက်သုံးပြီ။ အကယ်၍ သင်သည်ကျန်းမာရေးလူနာတစ် ဦး ဖြစ်ပါကသင်၏အိမ်ကြီးထွားမှုကိုရှာတွေ့နိုင်သည့်နေရာဖြစ်သည်။ ဒါပေမယ့် ၂၀၂၀ ခုနှစ်အကြောင်းပြောကြရအောင်။ ဒါက… ၂၀၂၀ ဖြစ်သင့်တယ်။ ငါ့ကီးဘုတ်ကဘာလို့မတုံ့ပြန်တာလဲ။ အိုကေပါတယ်။ ထိန်းချုပ်မှုရှာပါ…အိုကေအခုအလုပ်လုပ်နေပြီ။ အသေးစားနည်းပညာဆိုင်ရာပြissuesနာများအမြဲတမ်းဖြစ်ပျက်။ ဒီတော့ ၂၀၂ ဝကိုရှာကြစို့။ ၂၀၂ ဝဟူသောဝေါဟာရသည်ဤဥပဒေတွင် ၃၂ ကြိမ်ပေါ်လာလိမ့်မည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်အဘယ့်ကြောင့် ၂၀၂၀ ဟူသောဝေါဟာရကိုရှာဖွေနေသနည်း။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒါကိုကျော်သွားရင်ကျွန်တော်တို့ဟာအီလီနွိုက်စ်ရဲ့သမိုင်းမှာစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့အချိန်ကိုသွားလိမ့်မယ်။ လျှောက်ထားချက်တွေဟာအရွယ်ရောက်ပြီးသူအသုံးပြုရန်ဆေးခွင့်လိုင်စင်အမျိုးအစားအတွက်ဖြစ်တယ်။ ၂၀၂၀ မှာအွန်လိုင်းပေါ်လာလိမ့်မယ်။ ။ ပထမဆုံးအနီရောင်အက္ခရာရက်သည် ၂၀၂၀ မေလဖြစ်လိမ့်မည်။ ၂၀၂၀ ဇန်နဝါရီလ ၁ ရက်တွင်အမှန်တကယ်ပထမဆုံးစာရက်စွဲဖြင့်စတင်ကြပါစို့။ ၂၀၂၀၊ ဇန်နဝါရီလ ၁ ရက်သည်လူကြီးသုံးဆေးခြောက်ကိုသင်အမှန်တကယ်သွားဝယ်နိုင်သည်။ ဒါဟာအစဒီ၏ထိရောက်သောနေ့စွဲသောနေ့စွဲဖြစ်နိုင်သည်။
အခုမနေ့ကကျွန်တော်ဟာဆေးခြောက်ကိုတရားဝင်သတင်းအကြောင်းပြောနေတာပါ။ ကျွန်ုပ်တို့အသင်းဝင်ရန်ယခုစာရင်းသွင်းပါ။ ဗုဒ္ဓဟူးနေ့တိုင်းညနေ ၂ နာရီတွင်ကျွန်ုပ်တို့သည်တစ်ပတ်ဆေးခြောက်တရားဝင်သတင်းကိုဖတ်ရှုကြသည်။ ပြီးတော့အဲဒီထုတ်လွှင့်ချက်ကိုလွှင့်လိုက်တာနဲ့မကြာခင်မှာသူတို့ဟာများစွာသောဆေးခြောက်တရားဝင်သတင်းတွေရလေ့ရှိတယ်။ vis-a-vis ဆေးခြောက်ဖြတ်သန်းအီလီနွိုက်ပြည်နယ်အထက်လွှတ်တော်။ တောင်းပန်ပါတယ် ငါအချိန်ဖြည့်နိုင်မဖို့ပစ်ရန်ဘယ်သူ့ကိုမှမရှိပါ။ ဒါကြောင့် ၂၀၂၀၊ ဇန်နဝါရီလ ၁ ရက်နေ့မှာမင်းကိုဆေးခြောက်တရားဝင်ပြီးပြီလို့ ၀ ယ်ဖို့တရားဝင်သင့်တယ်။ သို့သော်လူတိုင်းထံမှဝယ်ယူခြင်းသည်တရား ၀ င်မဟုတ်ပါ။ ၎င်းအစားအရွယ်ရောက်ပြီးသူဆေးခန်းခွဲများအဖွဲ့အစည်းများအားစောစီးစွာခွင့်ပြုချက်မှ ၀ ယ်ယူခြင်းသည်တရား ၀ င်ဖြစ်သည်။ ဒါကြောင့်ငါဒီမှာဖြစ်၏။ ဒါကြောင့်ဒီဟာအခြေခံအားဖြင့်ဆေးခြောက်ဆေးကုသမှုခံယူတဲ့ကုမ္ပဏီတွေဖြစ်လာမှာပါ။ ၂၀၂၀ ရဲ့ပထမ ဦး ဆုံးနေ့စွဲမှာဆေးခြောက်ရောင်းသူတွေအနေနဲ့ဆေးခြောက်ရောင်းသူတွေစတင်ရောင်းချနိုင်မှာပါ။
အခု ၂၀၂၀ မှာ ၃၂ ခါပေါ်လာပြီ။ ထိုအခါငါရှာနေမဟုတ်ပါဘူး ... ရှိပါတယ်။ ဒီမှာသွား၊ ဒီမှာသွား။ ဒါကငါရှာနေတာ။ ၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ ၁ ရက်နေ့မတိုင်မီမေလ ၁ ရက်၊ ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ ၁ ရက်နေ့တွင်သတ်မှတ်ထားသည့်အရွယ်ရောက်ပြီးသူသုံးဆေးခွဲအဖွဲ့၏လိုင်စင်ကိုသတ်မှတ်ပေးသည်။ ဌာနများသည်စိုက်ပျိုးရေးဌာနကိုဆိုလိုသည်၊ စိုက်ပျိုးရေးဌာနကို ၂၀၂၀၊ မေလ ၁ ရက်နေ့မတိုင်မီအရွယ်ရောက်သူအသုံးပြုမှုဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းလိုင်စင်ထုတ်ပေးသည်။ ထို့နောက်သူတို့သည်အရွယ်ရောက်ပြီးသူလျှောက်လွှာကိုလုပ်လိမ့်မည်၊ ဟုတ်သည်၊ လျှောက်လွှာသည် ၁၉၉၉ ခုနှစ်အောက်တိုဘာ ၁ ရက်အထိရောက်လိမ့်မည်မဟုတ်ချေ။ ယောက်ျားများ၊ ကျွန်ုပ်အကြောင်းကျွန်ုပ်သိကောင်းသိပေမည်။ ငါလျှော်ကုမ္ပဏီတွေအများကြီးကိုယ်စားပြုသည်။ ထိုလျှော်လျှောက်လွှာကိုယခုနှစ်Aprilပြီလ ၃၀ ရက်အထိလူသိရှင်ကြားထုတ်ပြန်ခြင်းမရှိသေးပါ။ ဒါအမှန်ပါပဲ၊ လွန်ခဲ့သောတစ်လကယနေ့။ ထိုအချိန်တွင်ကျွန်ုပ်၏ဖုန်းပေါက်ကွဲခဲ့ပြီးလူအများကိုကူညီပေးနေသည်။
ယခုမူကား၊ အကျွန်ုပ်တို့သည်အလွန်တူညီသောအရာတစုံတခုရှိလိမ့်မည်။ လူအများအပြားသည်ထိုလိုင်စင် ၇၅ ခုအနက်မှတစ်ခုကိုလိုချင်သည့်နေရာ။ ပြီးတော့သူတို့ဟာဒီလိုင်စင်တွေထဲကတစ်ခုကို ၂၀၂၀၊ မေလ ၁ ရက်နေ့မတိုင်ခင်လျှောက်ထားချင်ကြလိမ့်မယ်။ ဒါပေမဲ့ဒါကအသုံးပြုရလွယ်ကူပြီးအသုံးပြုရလွယ်ကူသောလျှော်လိုင်စင်ကဲ့သို့မလွယ်ကူပါ။ အီလီနွိုက်စ်လယ်ယာစိုက်ပျိုးရေးဌာနမှဆင်းသက်လာသောဂျက်ဖ်ကော့စ်နှင့်ဆေးဘက်ဆိုင်ရာအပင်များ၏ဌာနသည်ထိုလျှောက်လွှာကိုများစွာလုပ်ဆောင်ခဲ့သည်။ ဒါပေမယ့်မင်းမှာပြတင်းပေါက်ရှည်တစ်ခုရှိတယ်။ ဘာကြောင့်လျှောက်လွှာများကိုအောက်တိုဘာ ၁ ရက်နေ့အထိမရရှိနိုင်တာလဲ၊ ဇန်နဝါရီ ၂၀ ရက်နောက်ပိုင်းမှာသူတို့ကလက်ခံမှာမဟုတ်ဘူး။ နောက်မေလ ၁ ရက်နေ့အထိအဲဒီလျှောက်လွှာတွေကိုထုတ်တော့မှာမဟုတ်ဘူး။ ဒါကြောင့်ဒီအကြောင်းကိုစဉ်းစားပါ။ အောက်တိုဘာ ၁၊ ဇန်နဝါရီ ၁၊ မေ ၁ ရက်။ ။ တောင်ကယ်ရိုလိုင်းနားမှဖုန်းခေါ်သည်။ ဒီနေ့ငါ့ကိုဖုန်းခေါ်ဖို့ပထမဆုံးဖောက်သည်မဖြစ်နိုင်ဘူး။
ဒါကြောင့်မင်းကသင့်လျှောက်လွှာတွေရောက်လာမယ့် ၂၀၂၁ ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလ ၁ ရက်ရှိပြီ။ သင်သည်လျှောက်လွှာကို ၂၀၁၉ ခုနှစ်အောက်တိုဘာ ၁ ရက်အထိရလိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။ ၇၅ နှစ်မပြည့်တော့ပါ။ ၇၅ ထက်ပိုသောအရာများရှိပါသည်။ သူတို့ကထိုတံခါးဝ၌ခြေထောက်ကိုရယူရန်ကြိုးစားနေကြသည်။ ထိုအခါမူကားသူတို့ကသူတို့ကိုငါးလအနိုင်ရသူကိုကြေညာသွားကြသည်မဟုတ်။ ပြီးတော့ဒါတွေဟာအမှတ်ပေးမယ့် application အမျိုးအစားတွေပါ။ နောက်ပြီးဒီ application တွေအတွက်ကြီးမားလာပါလိမ့်မယ်။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သင်ကဒီအဖွဲ့ကိုအတူတကွထားရမယ်၊ ဒီ applications တွေထဲမှာလာမယ့်ဒီ box အားလုံးကိုစစ်ဆေးဖို့ပဲ။ ဒီတော့ခင်ဗျားနားလည်တယ်၊ အကယ်လို့သင် ၂၀၀ ကိုရဖို့ကြိုးစားနေတယ်၊ ​​ဒီမှာ ၂၁၂ မှတ်ရှိနိုင်တယ်။ ကျွန်ုပ်သည်ဗွီဒီယိုတစ်ခုကိုယခုအချိန်တွင်ပြုလုပ်တော့မည်မဟုတ်ပါ၊ အကြောင်းမှာကျွန်ုပ်သည် ၄၅ ခုခန့်တွင်အစည်းအဝေးပြုလုပ်ရန်လိုအပ်ပြီးဖြစ်သည်။
ဒါကြောင့်အချိန်ကိုက်ခြင်းအကြောင်းနည်းနည်းလေးပြောလို့ရပြီးဆေးခြောက်ကလူနာတွေအတွက်အိမ်ကြီးထွားလာတယ်။ နောက်တစ်ခုက screen share ထဲကိုပြန်ဝင်ကြည့်ကြရအောင်။ ပြီးတော့စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့အနီရောင်စာရက်တချို့ကိုတွေ့ရလိမ့်မယ်။ ဒါကြောင့်ဒီတစ်ခု၊ အရွယ်ရောက်ပြီးသူအသုံးပြုမှုအဖွဲ့အစည်းလိုင်စင်ရသူများ၏နေရာဒေသအလိုက်ကွဲပြားမှုကိုသေချာစေရန်။ အောက်ပါလိုင်စင်ရသူများကို BLS ဒေသတစ်ခုစီတွင် blah, blah, blah အဖြစ်ချီးမြှင့်ရမည်။ ဒါဆိုငါ Peoria မှာဒီမှာနေတယ်၊ ​​ငါတို့သုံးယောက်သွားမယ်။ ဒါကတော်တော်လေးအေးဆေးပဲ။ စိန့်လူးဝစ္စareaရိယာလေးခုရလိမ့်မည်၊ ချီကာဂိုသည် ၄၇ ရလိမ့်မည်။ ငါဆိုလိုတာကအီလီနွိုက်စ်အတွက်အများကြီးပိုများတယ်။ ငါဆိုလိုတာကရော့ခ်ကျွန်းရဲ့အသံကျယ်ကျယ်အော်ဟစ်တဲ့အသံတစ်ခုတည်းကိုသာရတယ် ဒါပေမယ့် Peoria သုံးယောက်ရပြီ။ ဟုတ်ပါတယ်၊ အဲဒီလိုလုပ်ဖို့နည်းလမ်း [Jehan 00:08:58] ။ ကောင်းတယ်
ဒါ့အပြင်ဇန်န ၀ ါရီလ ၂၁ ရက်မှာလည်းစိုက်ပျိုးမှုတွေရှိနေတယ်။ ကြည့်ကြရအောင် ဦး စီးဌာနရှစ် ... အိုးဒီဟာဘာလဲဆိုတာတောင်မသိဘူး။ အဆိုပါလိုင်စင်အသိုင်းအဝိုင်းကောလိပ်ဆေးခြောက်အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းရှေ့ပြေးအစီအစဉ်။ အိုးဒါကတကယ်ကိုကောင်းပါတယ် ဒါကငါတောင်မှမသိဘူး ... အဲဒီမှာရှိတာတောင်မှမသိခဲ့ဘူး။ အပိုဒ် ၂၅၊ ဆေးခြောက်ကောလိပ်၊ ဆေးခြောက်အသက်မွေး ၀ မ်းကျောင်းမှုဆိုင်ရာအစီအစဉ်။ ဆေးရုံတက်ရသူ၊ ဆေးခြောက်တွင်အဓိကဖြစ်သည်။ fuck ဆိုတဲ့ငါတောင်မှ sign up လိမ့်မယ်။ ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒါနှစ်ခုသီးခြားဥပဒေကြမ်းတွေပါ။ အထက်လွှတ်တော်မအောင်မြင်သော SB21 ဖြစ်သောဥပဒေကြမ်းသည်အောက်လွှတ်တော်တွင်စတင်ခဲ့သည့်အတိုင်းအထက်လွှတ်တော်သည် HB25 ကိုအတည်ပြုခဲ့သည်။ အဲဒီဥပဒေကြမ်းဟာစာမျက်နှာ ၆၁၀ ရှည်လျားတယ်။ ဒီတော့…ရပ်ရွာကောလိပ်ဆေးခြောက်အသက်မွေး ၀ မ်းကြောင်းဆိုင်ရာရှေ့ပြေးအစီအစဉ်တစ်ခုရှိနေတယ်။ ဘယ်သူမှမပြောရဲတော့ဘူး။ ဒါကငါ့ကိုအများကြီးအံ့သြစရာမရှိပါ။ သို့သော်၎င်းသည်ဆေးခြောက်အဓိကအီလီနွိုက်ပြည်နယ်သို့လာခြင်းနှင့်တူသည်။ တော်တော်ချိုတယ်
ထိုအခါငါကအကြောင်းစိတ်မကောင်းပါဘူး။ ဒီ ၂၀၂၀ ပြည့်လွန်နှစ်တွေအကုန်လုံးငါဖြတ်သန်းခဲ့ရတယ်။ သူတို့ထဲမှာ ၃၂ ယောက်ရှိတယ်။ ယခုတွင်ငါသည်ဤပြန်လှည့်ပါတော့မည်။ မနေ့ကအထက်လွှတ်တော်မှအတည်ပြုလိုက်သောအီလီနွိုက်ပြည်နယ်အရွယ်ရောက်ပြီးသူအသုံးပြုမှုတရားဝင်မှု၏အရှိဆုံးစိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်ရှုထောင့်ကဘာလဲဆိုတာကိုလျှင်မြန်စွာပြောသွားတော့မှာပါ။ ပြီးတော့အကောင်းဆုံးမျှော်လင့်ချက်တစ်ခုအကြောင်းပြောမယ်ဆိုပါစို့။ ဒါကဖြစ်ပျက်မလားမသိဘူး။ ကျနော်တို့အကြောင်းအစစ်အမှန်မြန်ဆန်စွာပြောပါလိမ့်မယ်။ သို့သော် ၂၀၂၀၊ ဇူလိုင် ၁ ရက်တွင်ယာဉ် ၄၀ စီးခွင့်လိုင်စင်ရရှိသည်။ ထို့နောက် ၂၀၂၁ ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာ ၂၁ ရက်အထိရောင်းချနိုင်သည်။ ၂၀၂၁ ဒီဇင်ဘာ ၂၁ ရက်မှာမူ  ထပ်မံ၍ လိုင်စင် ၆၀ အထိရရှိသည်။ ဒီတော့အနည်းဆုံး ၁၀၀၊ အခု ၁၀၀ ကောင်းမယ်၊ ယာဉ်ကြီးထွားခွင့်လိုင်စင်တွေပေါ်လာလိမ့်မယ်။ ပြီးတော့အဲဒီယာဉ်တွေလိုင်စင်ထုတ်ပေးတာကိုကန့်သတ်ထားတယ်။ ပြီးတော့ငါသွားမယ်။ ပြီးတော့ဒီမှာနောက်ထပ်တစ်ခုရှိတယ်။ ထို့အပြင်ယာဉ်ထုတ်လုပ်သူလိုင်စင်သည် ၁၅၀ နှင့်အခြားကန့်သတ်ချက်များထက်ကျော်လွန်ပါက။ ပြီးတော့ဒီမှာငါတို့ကျော်သွားလိမ့်မည်ဟုလျှောက်လွှာပစ္စည်းပစ္စယပါပဲ။
လက်မှုပညာရှင်များသည်လူများသည်ဆေးခြောက်အာကာသထဲသို့ပြန်လည်ရောက်ရှိလာနိုင်သည့်အတွက်စိတ် ၀ င်စားကြသည်။ ထိုသူတို့တွင်မည်သူနှင့်မည်သူပိုင်မည်နှင့် ပတ်သက်၍ ကန့်သတ်ချက်များရှိသည်။ သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး၊ ယာဉ်ကြီးထွားမှုအတွက်သစ်ထုတ်လုပ်မှုယိုယွင်းမှုများစွာရှိလိမ့်မည်။ ပြီးတော့သူတို့ကစားကြပြီးတဲ့နောက်အီလီနွိုက်ကရပ်လိုက်တယ်။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အဆင်ပြေသလိုသင်ကြီးထွားတယ်၊ လုပ်ဆောင်တယ်၊ ဟုတ်လား ဘယ်သူကအိုးကိုမောင်းနေတာလဲ ဒါကလာမယ့်လာမယ့်လိုင်စင်အသစ်၊ သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးဖြစ်လိမ့်မယ်။ ဒီတော့ဒီရက်တွေထဲကတစ်ခုဖြစ်တဲ့ဒီအနီရောင်အက္ခရာရက်စွဲတွေထဲကတစ်ခုကမင်းတို့မှာကွဲပြားတဲ့လိုင်စင်အမျိုးအစားကိုရရှိနိုင်တယ်။ ဆေးခန်းနှင့်စိုက်ပျိုးရေးဌာနနှင့်ပရိုဆက်ဆာသည်ဆေးခြောက်များကိုသယ်ဆောင်နိုင်မည်မဟုတ်ပါ။ သူတို့ကထိုဆေးခြောက်ကိုသယ်ယူရန်လိုင်စင်ရသည့်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးသို့ပေးရမည်။ ဒါကြောင့်ငါဓာတ်မတည့်မှုကြောင့်ငါ့ကိုသတ်ပစ်တဲ့အတွက်ငါဒီကိုထုပ်တော့မယ်။
သင်သတိမပြုမိသည့်အတိုင်းအီလီနွိုက်ပြည်နယ်သည် ၁၉၂၇ ကဲ့သို့သောရေလွှမ်းမိုးဘေးကြီးမှအဆိုးရွားဆုံးရေလွှမ်းမိုးမှုဒဏ်ကိုတစ်နိုင်ငံလုံးခံစားခဲ့ရသည်။ ထိုသို့မဟုတ်ပါကသတင်းများ၌သူတို့ပြောဆိုခဲ့သည့်အတိုင်းပင်။ ပြောင်းဖူးကလယ်ကွင်းထဲမှာတကယ်မဟုတ်ဘူး။ အဆိုပါလယ်ကွင်းများအခြေခံအားဖြင့်နားမှာဖြစ်ကြသည်။ မင်းစပါးစိုက်နိုင်တယ်။ ဒါက ... အီလီနွိုက်စ်မှာစပါးစိုက်ရေပမာဏနဲ့တူတယ်။ ထိုအခါငါကအမှန်တကယ်အတော်လေးနည်းနည်းပြန်လျှော်သီးနှံများကိုပြန်သတ်မှတ်ထားထင်ပါတယ်။ ဂရုမစိုက်ဘူး? မနေ့ကအီလီနွိုက်ပြည်နယ်အထက်လွှတ်တော်မှဆေးခြောက်ကိုတရားဝင်အဖြစ်သတ်မှတ်သည်။ အီလီနွိုက်ပြည်နယ်ဥပဒေပြုလွှတ်တော်ကသောကြာနေ့၊ မနက်ဖြန်၊ မေလ ၃၁ ရက်မှာရွှေ့ဆိုင်းထားလို့ပါ။ ဒီကနေ့မှာတော့ HB1927 ရဲ့ကိုယ်ပိုင်ဥပဒေကြမ်းကိုအောက်လွှတ်တော်ကအတည်ပြုလိမ့်မယ်။ မနက်ဖြန် JB Pritzker သည်၎င်းကိုဥပဒေအဖြစ်လက်မှတ်ရေးထိုးလိမ့်မည်။ ဒါပေမယ့်ဒါကမြန်လွန်းတယ် ဒီခေါင်းကြီးပိုင်းကိုခေါင်းပုံဖြတ်အမြတ်ထုတ်ဖို့အချိန်လိုတယ်။ မေလ၏ပထမဆုံးစနေ၊ တနင်္ဂနွေနေ့တွင်ပြုလုပ်သောသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲတွင်သူနှင့်တစ်လကြာသွားခဲ့သည်။ သူကငါစာမျက်နှာတစ်ခုဖန်တီးသောသူတို့အားကိုးစာမျက်နှာများကိုထုတ်လုပ်ဘယ်မှာ။ ဤရွေ့ကား, ဒီအဖြစ်ကောင်းစွာစာမျက်နှာတစ်ခုဖြစ်လိမ့်မည်။ သို့သော်ဤတစ်ခုသည်အီလီနွိုက်ပြည်နယ်ရှိအရွယ်ရောက်ပြီးသူသုံးဆေးခြောက်အတွက်အိမ်တွင်ကြီးထွားရန်အာရုံစူးစိုက်ရန်အတိုချုပ်ထားသောစာမျက်နှာတစ်ခုဖြစ်လိမ့်မည်။ ပြီးတော့တခြားအထောက်အကူပြုကိစ္စရပ်များ။
ဒီစာမျက်နှာ ၆၁၀ အားလုံးဖြတ်သန်းသွားတဲ့အခါ၊ ကျွန်ုပ်ရဲ့အကြောင်းအရာကိုအလုပ်အကိုင်ဖန်တီးဖို့ပိုပြီးလွယ်ကူသွားစေလိမ့်မယ်။ ဒါပေမယ့်လည်းအတန်ငယ်ပိုပြီးစိတ်ညစ်စရာ။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ငါဒီအကြောင်းအရာကိုလုပ်တဲ့အခါမင်းကအင်တာနက်ပေါ်မှာရောက်နေတယ်၊ ​​ပြီးတော့မင်းကလူတွေကမင်းကိုခေါ်တာပေါ့။ ပြီးတော့လူတွေကသင့်ကိုဒီ application တွေကိုအတူတကွထားဖို့ကူညီပေးပါ။ နှင့်သင်တန်း၏သငျသညျလုံးဝကြောင်း onboard ဖြစ်ကြသည်။ ပြီးတော့အဲဒါတော်တော်များများ ... သွားမယ် ... ငါတစ်နှစ်အတွင်းမှာမီးခိုးရောင်ဖြစ်လိမ့်မယ်။ ငါတို့တွေ့လိမ့်မယ် ငါအိပ်လို့ကောင်းတယ်မျှော်လင့်ပါတယ် ဒါကြောင့်မနက်ဖြန်မှာသူတို့ကိုယ်ပိုင်ဥပဒေကြမ်းကိုအတည်ပြုပြီး JB Pritzker ကသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲကြီးတစ်ခုလုပ်မယ်။ လူတိုင်းကဒီဟာကိုအီလီနွိုက်စ်ပြည်နယ်အတွက်အံ့ thing စရာကောင်းတဲ့အရာလို့ဆိုတယ်။ ထိုသို့ဖြစ်လိမ့်မည်။ ပြီးတော့ငါတို့ရှေ့သို့ရွှေ့။ ဒီနေ့ဖြစ်မယ်ဆိုတာငါမသိဘူး ကျွန်တော်အံ့အားသင့်မှာမဟုတ်ဘူး အီလီနွိုက်ပြည်နယ်သည်ဆေးခြောက်ကိုတရားဝင်ဖြစ်စေရန်ပထမဆုံးဥပဒေပြုပြည်နယ်ဖြစ်လာလျှင်၎င်းသည်တကယ်အံ့သြဖွယ်ဖြစ်သည်။ အဲဒီလိုလုပ်ဖို့ဆိုရင်သမ္မတ၊ ပြည်နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးရော၊ ပြည်နယ်ဥပဒေပြုလွှတ်တော်နှစ်ရပ်လုံးပါလိုအပ်ပါတယ်။ ပြီးတော့သူတို့လိုအပ်နေတုန်းပဲ။
ဒီဟာကိုအဆုံးသတ်ဖို့ငါအီလီနွိုက်ပြည်နယ်အရွယ်ရောက်ပြီးသူသုံးစွဲခငွေကုန်ကြေးကျခံလိမ့်မယ်။ ၎င်းသည်အထွေထွေဆောင်းပါး ၉၉၉ ဖြင့်အဆုံးသတ်သည်။ ဤအချက်ကို [Herman Cane 999:00:15] ရေးဆွဲခဲ့သည်ဟုကျွန်ုပ်ယုံကြည်သည်။ သင်မြင်တွေ့နိုင်သည့်အတိုင်းစာမျက်နှာ ၆၁၀ ရှည်သည်။ အရှိန်သို့မဟုတ်နှောင့်နှေးခြင်းမရှိပါ။ အိုး gosh ။ ဟုတ်တယ် ဘာလို့လဲဆိုတော့သူတို့ကဒါကိုထည့်ထားလို့ပါ။ အခုအိန္ဒိယမှာရှိတဲ့ကျွန်ုပ်၏ coder တစ်ခုခုလိုအပ်နေသည်။ ကောင်းပြီကောင်းပြီ၊ ဒါကငါ့ကိုဘယ်လိုဖြစ်နေလဲဆိုတာပဲ။ သငျသညျအခြို့သောအချိန်ရပြီးတော့လူတွေကပစ္စည်းပစ္စယချင်တယ်။ ကောင်းပြီ, ငါရုံးခန်းရတယ်။ ငါတစ်ယောက်ယောက်လာနေပြီ။
10100HB1438sam002 - 40 - LRB101 04919 RLC 61359 တစ် ဦး
10100HB1438sam002 - 41 - LRB101 04919 RLC 61359 တစ် ဦး
10100HB1438sam002 - 42 - LRB101 04919 RLC 61359 တစ် ဦး
10100HB1438sam002 - 43 - LRB101 04919 RLC 61359 တစ် ဦး
10100HB1438sam002 - 44 - LRB101 04919 RLC 61359 တစ် ဦး
10100HB1438sam002 - 45 - LRB101 04919 RLC 61359 တစ် ဦး
10100HB1438sam002 - 46 - LRB101 04919 RLC 61359 တစ် ဦး
10100HB1438sam002 - 47 - LRB101 04919 RLC 61359 တစ် ဦး
10100HB1438sam002 - 48 - LRB101 04919 RLC 61359 တစ် ဦး
10100HB1438sam002 - 49 - LRB101 04919 RLC 61359 တစ် ဦး
10100HB1438sam002 - 50 - LRB101 04919 RLC 61359 တစ် ဦး
10100HB1438sam002 - 51 - LRB101 04919 RLC 61359 တစ် ဦး
10100HB1438sam002 - 52 - LRB101 04919 RLC 61359 တစ် ဦး
10100HB1438sam002 - 53 - LRB101 04919 RLC 61359 တစ် ဦး
10100HB1438sam002 - 54 - LRB101 04919 RLC 61359 တစ် ဦး
10100HB1438sam002 - 55 - LRB101 04919 RLC 61359 တစ် ဦး
10100HB1438sam002 - 56 - LRB101 04919 RLC 61359 တစ် ဦး
10100HB1438sam002 - 57 - LRB101 04919 RLC 61359 တစ် ဦး
10100HB1438sam002 - 58 - LRB101 04919 RLC 61359 တစ် ဦး
10100HB1438sam002 - 59 - LRB101 04919 RLC 61359 တစ် ဦး
10100HB1438sam002 - 60 - LRB101 04919 RLC 61359 တစ် ဦး
10100HB1438sam002 - 61 - LRB101 04919 RLC 61359 တစ် ဦး
10100HB1438sam002 - 62 - LRB101 04919 RLC 61359 တစ် ဦး
10100HB1438sam002 - 63 - LRB101 04919 RLC 61359 တစ် ဦး